Sanduuqa Maaliyadeed ee Maalgelinta | FXCC waa xubin ka tirsan ICF
Home / About / Waa maxay sababta FXCC? / Ilaalinta Macaamiisha Macmiilka
FXCC marwalba waxaa ka go'an heerka ugu sareeya ee sharciyada caalamiga ah ee waafaqsan sharciga, mar walbana waxa ay doonayeen in ay siiyaan nabad gelyo dhamaystiran ganacsatadeena, markasta oo ay ka ganacsadaan iyo meel kasta oo ay ku saleysan yihiin. Sidaa daraadeed, sababtoo ah caalamkeenu waxa uu gaari karaa qaaradaha soo koraya, shirkaddu waxay xaqiijisay in qaab-dhismeedkiisa sharci uu u hoggaansamaayo shuruudaha lagama maarmaanka u ah Yurub oo keliya, laakiin sidoo kale wuxuu u yahay heer caalami ah.
Qawaanno badan oo ay qaadatay FXCC ayaa ka baxsan shuruudaha asaasiga ah ee aasaasiga ah ee lagu soo rogay inay ka shaqeeyaan dalal kala duwan Tani waxaan u sameeynaa si aan macaamiisheena u siino raaxo iyo kalsooni kasta, si ay marwalba u dareemaan si gebi ahaanba loo hubiyo wadashaqeynteena annaga.
Nidaamkeena ganacsiga, guusheena waxay si toos ah ula xiriirtaa macaamiisheena guusha, iyo iyada oo loo marayo kalsooni iyo daahfurnaan, in aynu nahay qiimaha asaasiga ah, waxaanu eegnaa inaan dhisno xiriir adag oo macaamiisheena, had iyo jeer waxaan danta maskaxda ku hayno.
Badbaadinta Badbaadinta waa Hadafkayaga
Amniga iyo kormeerka
FXCC waxay damaanad qaadeysaa ammaanka iyo amniga macaamiisheena xisaabinta ganacsiga. Intaa waxaa dheer, dhammaan codsiyada dhaqaale ayaa si dhow ula socdaan si loo hubiyo in la hubiyo ammaanka iyo in la hubiyo habsami u shaqeynta.
Xakameyn iyo Sharci ahaan
Inaad noqoto qof si buuxda u xaddidan oo si fiican u xaddidan tan iyo 2010, waxaan ku ballanqaadnaa inaan macaamiisheena si caddaalad ah ula dhaqanno iyada oo diiradda saareysa bixinta ilaalinta macaamiisha iyo ammaanka ganacsiga.
Trust iyo Transparency
Wadashaqeyn guul iyo waqti dheer ah ayaa lagu dhisaa kalsoonida. Iyadoo ujeedadeedu tahay in ay bixiso ganacsiyada ganacsadaha ganacsiyadu waxay raadinayaan, si ay u helaan ixtiraam iyo kalsooni macaamiisheena, sidaa daraadeed waxa ay xaqiijinayaan danahooda ugu wanaagsan, FXCC waxay ku shaqeyneysaa qaabka dhabta ah ee STP / ECN. Marka sidaas la samaynayo, waxaynu ku adkeynaynaa daahfurnaanta iyo khilaafka danta.
Ilaalinta Macluumaadka Gaarka ah
Nidaamkeena amniga ah ee sugan ee gobolka oo dhan (SSL), dhammaan macluumaadka macaamiisheena waxaa loo hayaa ammaan.
FXCC waxay si joogto ah u tilmaamaysaa, qiimaysaa, loona xakameynayaa nooc kasta oo khatar ah oo la xidhiidha hawlgalkeeda.
Dhamaan lacagaha macaamiisha waxaa lagu qabtaa xisaabaadka kala duwan, iyaga oo gebi ahaanba kala soocaya xisaab kasta oo ka mid ah shirkadaha FXCC.
Bangiga Caalamiga ah ee Hogaamiya
Sida aan u qoondeeyno inaan heysano macaamiisheena macaamiisheena, waxay ku sugan yihiin bangiyada caalamiga ah ee hogaaminaya.